Swift2- MYSTERY ZILLION
June 2015 edited June 2015 in iOS Devlopment
ဒီတစ်ခေါက် WWDC မှာ Swift2ကို ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ Siwft2က တော့ Xcode7Beta မှာ ပါလာပါတယ်။ Swift2အတွက် စာအုပ်ကိုတော့ https://itunes.apple.com/us/book/swift-programming-language/id1002622538?mt=11 , iBook store မှာ download ချနိုင်ပါတယ်။ Swift ဟာ 2015 နှစ်ကုန်မှာ open source ပေးပါလိမ့်မယ်။ Linux ပေါ်မှာ swift language ကို run လို့ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် နောင်တချိန်မှာ swift မှာ website backend တွေပါ ဖန်တီးလာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
hehe Rabbit converter doesn't work on Swift 2. JSONObjectWithData method causing errors.
Xcode7hasaconverter for swift 1 to swift 2. I still not try yet.
Hi! Ko Saturngod, can I write ios application in windows 8.1? If so, let me know how to do? Thanks anyway.
no, Xcode only runs on OS X